I-Raw S4 powder (401900-40-1) Abakhiqizi - Phcoker Chemical
SKU: 401900-40-1 Isigaba: Uchungechunge lweSarm
I-Raw S4 powder (i-401900-40-1) ividiyo
I-Raw S4 powder (401900-40-1) Incazelo
I-S-4, eyaziwa nangokuthi i-Andarine noma i-GTx-007, ethathwe njengomlomo. Kungenxa yeklasi yezidakamizwa ezibizwa ngokuthi i-SARM's-a non-steroidal investigational selective andorgen receptor modulators enemiphumela ye-tishu ekhethiwe ne-androgenic ne-anabolic ezilwaneni. Ukwelashwa kwezimo ezinjengokubhujiswa kwemisipha, i-osteoporosis kanye ne-benign prostatic hypertrophy. Akuncane kakhulu kokubili ama-anabolic nemiphumela ye-androgenic kunezinye ama-SARM. Namuhla, lisetshenziswa kakhulu futhi lithengiswa njengamakhemikhali ocwaningo, elisetshenziselwa abagijimi abafuna ukuthola zonke izinzuzo zamandla kanye nokuzuza kwemisipha enomzimba ngaphandle kwemiphumela emibi eyingozi ebonwe nge-anabolic steroids. Ngaphezu kwalokho, i-Raw S4 powder nayo isetshenziselwa njengengxenye yezinhlayiya ze-steroid ukuthuthukisa umjikelezo ngaphandle kokungeza imiphumela emibi kakhulu, noma ukunambitheka.
I-Raw S4 powder (401900-40-1) Siziqu
Igama Product I-Raw S4 enamandla
Igama leKhemikhali I-Andarine, i-GTX-007, i-UNII-7UT2HAH49H, i-7UT2HAH49H, i-AK-41009, i-SARM S-4, i-Andarine-i-GTX-007, i- 2S -3- (i-4-Acetamidophenoxy) -2-hydroxy-2-methyl-N- I-4-nitro-3- (trifluoromethyl) phenyl] propanamide
I-Drug Class Ama-SARMS, ama-Inhibitors
CAS Inombolo 401900-40-1
IMisa ye-Monoisotopic I-441.115 g / mol
Ukuxuba Pi-oint I-70-74 ℃
Fukuvuselela kabusha Pi-oint 152 ° C
I-Half Half-Life Ngaphansi kwe-7hours
Color I-Pale Yellow Solid
Sukufaneleka I-Solomle ku-DMSO (85 mg / mL), Amanzi (<1.2 mg / mL), ne-Ethanol (85 mg / mL), ibuye ixazulule ku-Propylene Glycol ne-PEG400.
I-Raw S4 enamandla Aukuphikisana Amaphilisi amancane ama-S4 amapayipi / amakhisolula wokuCheka, Ukubuyisela kabusha, ukuHlonipha okuMandla nokuNamandla (sans bloating)
Umswakama omkhulu we-S4 powder (401900-40-1)
I-S4 SARM isetshenziselwa konke okuningi kakhulu. Ukusika, ukukhwabanisa noma ukubuyisa akuyona inkinga ngale modulator ekhetha i-androgen receptor.
Ngesikhathi esinqunyiwe, ungalindela ukuthi kuzokusiza uvalwe futhi ube nemisipha. Kuyaziwa ukwandisa amandla nobukhulu ngisho noma uqeda amakholori ambalwa.
Ngombono wami, i-S4 SARM i-powder eluhlaza impela ikhanya lapho kukhwabanisa.
Kungakapheli isonto noma ezimbili uzoqala ukuthola amandla amaningi nosayizi. Ngisho nomthamo ophansi we-50mg.
Futhi into enkulu ukuthi le SARM ibhekwa njengengxenye ehlanzekile. Ngeke ube nokugcinwa kwamanzi noma ukubhuqa phakathi nenqwaba.
Ngokuqinisekile kungokwesinye sezi-SARM ezinamandla kakhulu. Anginakuzaza engqondweni yami ukuthi mhlawumbe unamandla kune-LGD4033.
Njengazo zonke ezinye izidakamizwa ze-SARM, i-S4 powder eluhlaza isebenza ngokuxuba kuma-receptors. Lokhu kusebenza kufana nokuthi i-steroids isebenza kanjani. Umehluko kuphela ukuthi awufaki imiphumela emibi kanye nokungahleleki okuhlobene nokusebenzisa i-steroids. I-S4 isetshenziselwa ukuzula ngokuqondile amandla, ukusebenza, kanye nokwakhiwa kwemisipha.
Ukusebenza kwe-S4 powder oluhlaza emzimbeni kuyakhethwa. Lokhu kusho ukuthi ukhetha izicubu ezifuna ukusebenzisana nazo futhi zithuthukise kakhulu izicubu ngenkathi kuqinisekiswa ukuthi ezinye izingxenye zomzimba azilimazi.
Kungenza imisipha yakho ikhuni, i-vascular and dry from kwesonto-1 kuya phambili. Ngokungafani noWinstrol, kunzima kuphela.
Ukwengeza kulokhu, kudala imvelo ephelele ye-anabolic emzimbeni evumela ezinye izinhlanganisela ukukhahlela.
I-S4 powder eluhlaza yayiphezu kwendawo yonke. Abantu babenezela ekutheni izinto zokusika, izinqwaba zokubhukuda, izinhlelo zokuvuselela umzimba.
Lokho kwaze kwaba yilapho imibiko ye-anecdotal yemiphumela yemiphumela yombono iqalile ukwenza imijikelezo.
Ekuqaleni imibiko yayibukeka ikakhulu ngokubona imibala engalungile kanye ne-tinge ephuzi ezintweni. Hlunga njengokubona umhlaba ku-Sepia.
Kodwa lapho imibiko mayelana nobuphofu bendawo eqala ukushaywa, iS4 yaba yi-bête-black of abathandi be-SARMS.
Ngakho-ke, lezo zithengiswa cishe zazincipha zero. Akekho othanda ukuthungatha ngombono wabo emva kwakho konke.
Izinzuzo we-Raw S4 powder (401900-40-1)
I-S4 isetshenziselwa ukusika, ukuxubha nokuvuselela.
usebenzisa i-S4 powder eluhlaza ukwandisa uketshezi kwamafutha emzimbeni futhi kunciphisa i-lipoprotein lipase emzimbeni. I-S4 iqinisekisa ukuthi umzimba awulahlekelwa umthambo wayo ngesikhathi sokulahlekelwa kwekhalori. Umjikelezo wokusika uthatha amaviki angu-12.
Njengoba nje leli gama lisho, ukukhwabanisa kusho amandla ngaphandle kwemali engenayo engadingekile nokugcinwa kwamanzi. Umphumela wokukhwabanisa we-S4 awunjalo njalo, kodwa uqinisekisa ukuthi umzimba awulahlekelwa yimuphi amandla aqoqwe kuwo wonke umjikelezo.
◆ Ukuqeda kabusha:
Lena yindlela yokugcoba umzimba wezinhlanzi ezinomzimba futhi owandayo ngesikhathi esisodwa. I-S4 igqugquzela ubukhulu bomzimba obuqinile futhi kwandisa ukusebenza komzimba.
I-Raw ye-Rax S4 enconyiwe (401900-40-1) Isilinganiso
I-S4 ifana nesimo esibi kakhulu se-Winstrol. Iqinisile ngempela emasethweni aphansi ka-25 kuya ku-50mg. Naphezu kokuba i-SARM elula, empeleni impela ngempela.